Internet Ministries - Chii chatinofanira kutarisira patinoshanyira isu
Zvatinofanira kutarisira paunoshanyira isu
Izvi ndizvo zvaunogona kutarisira paunoshanyira isu.
Munyengetero: Munguva yekunamatira basa vazhinji vevarume vanotungamirira ungano muminyengetero yevanhu vose.
Mabhuku 2: 42 "Uye vakaramba vakasimbiswa muidzidziso yevaapositori nekuyanana, mukuputsa chingwa, uye muminyengetero.
Kuimba: Tichaimba nziyo dzinoverengeka nenziyo pamwechete, kutungamirirwa nemumwe kana vatungamiri venziyo. Izvo zvichave zvichinyorwa capella (pasina kubatana kwezviridzwa zvemimhanzi). Tinoimba nenzira iyi nokuti inotevera chimiro chechechi yekutanga remakore uye iyi ndiyo mhando chete yemimhanzi inobvumirwa muTestamente Itsva yekunamata.
VaEfeso 5: 19 "vachitaurirana mumwe nemapisarema uye nenziyo nenziyo dzomweya, kuimba nekuimba nziyo mumoyo mako kuna Ishe,"
Kudya kwaShe Kwemanheru: Isu tinodya chingwa chaShe cheSvondo rese neSvondo, tichichitevera muenzaniso wekereke yekutanga remakore.
MABASA AVAPOSTORI 20: 7 "Zvino nezuva rokutanga revhiki, vadzidzi vakati vaungana kuzomedura chingwa, Pauro, akagadzirira kuenda mangwana, akataura navo ndokuenderera mberi neshoko rake kusvikira pakati peusiku."
Mukudya kweKudya kwaIshe tinorangarira rufu rwaShe kusvikira Auya zvakare.
1I VAKORINDE 11: 23-26 Nokuti ndakagamuchira kubva kuna Ishe izvo zvandakakupai zvakare: kuti Ishe Jesu neusiku uhwo hwaakatengeswa akatora chingwa, uye paakavonga, akamedura ndokuti, Tora udye; uyu ndiwo muviri wangu wakavhuniwa nekuda kwenyu; ita izvi muchindiyeuka. "Nenzira imwecheteyo Akatora mukombe mushure mekudya, achiti," Mukombe uyu isungano itsva muropa rangu. Izvi ndizvo, nguva dzose kana muchiinwa, muchindiyeuka. "Nokuti nguva dzose kana muchidya chingwa ichi nokunwa mukombe uyu, munoparidza rufu rwaShe kusvikira Auya.
Kupa: Tinopa mupiro webasa rechechi zuva rimwe nerimwe rokutanga revhiki, tichiziva kuti Mwari akakomborera umwe neumwe wedu. Chechi inotsigira mabasa mazhinji akanaka anoda rubatsiro rwemari.
1st VAKORINDE 16: 2 "Pazuva rokutanga revhiki regai mumwe nomumwe wenyu aise chimwe chinhu parutivi, achichengetedza sezvaanogona kubudirira, kuti pasava nehomwe kana ndichisvika."
Chidzidzo cheBhaibheri: Isu tinoita mukudzidza Bhaibheri, kunyanya nekuparidza kweShoko, asiwo nekuverenga Bhaibheri uye kutungamirira kudzidzisa.
2I Timoti 4: 1-2 "Ndinokuraira naizvozvo pamberi paMwari naIshe Jesu Kristu, uyo achatonga vapenyu nevakafa pakuonekwa kwake neumambo hwake: Paridza shoko! Ivai vakagadzirira mumwaka uye pasina nguva. tsiura, kurudzira, nekutsungirira kose nekudzidzisa.
Pakupera kwe mharidzo, kukokwa kuchaendeswa kuna ani zvake anoda kufarira. Kuti udzidze zvakawanda nezvechiKristu, kuva muKristu kana kukumbira minyengetero yechechi, tapota ita kuti chido chako chizivikanwe.
Basa redu rekunamatwa rinofungidzirwa ssika yemachechi aKristu. Haisi nguva kana kuti inobatsira. Tinoedza kushumira Mwari muMweya neChokwadi.
John 4: 24 "Mwari Mweya, uye avo vanomunamata vanofanira kunamata mumweya nechokwadi."